बालबालिकाका लागि आवासीय स्रोत कक्षा सञ्चालन « रिपोर्टर्स नेपाल
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ गर्जमुनीमा रहेको शिवशङ्कर माध्यमिक विद्यालयमा कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको बौद्धिक अपाङ्गता आवसीय स्रोत कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
कोरोनाका कारण झण्डै दुई वर्ष कक्षा प्रभावित भएको थियो । कक्षामा ५ वर्ष पुरा भई १४ वर्ष ननाघेका १० जना बालबालिकालाई राखिएको छ । कक्षामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, कैलाली र कञ्चनपुरका गरी तीन जिल्लाका बौद्धिक अपाङ्गता र सुस्तमनस्थीति भएका बालबालिकाको बोली, भाषा, आनीबानी र व्यवहार परिवर्तनका लागि राखिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुदत्त जोशीले बताउनुभयो ।
फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई चित्र, सङ्गीत, नृत्य, श्रव्यदृश्यमार्फत पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यो कार्यसँगै बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सरसफाइमा ध्यान पु¥याउने कार्यमासमेत जोड दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्रोत कक्षामा सहभागी भई पढ्दै आएका बालबालिकाको हेरचाहका लागि एक जना आया (हेरचाह गर्ने आमा) र एकजना स्रोत शिक्षकको व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्यालयले बालबालिकाको पठनपाठनसँगै बस्नका लागि छ वटा आवासीय कक्षा कोठा, भान्सा र शौचालयको व्यवस्था मिलाएको छ ।
बालबालीकालाई पोशाक, शैक्षिक सामग्री, बस्नका लागि बेड, बेडसिट, सिरक, गद्दा, टुथपेष्ट, ब्रस, साबुनलगायत आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था विद्यालयले मिलाएको छ । सशर्त अनुदान कार्यक्रममार्फत स्रोत कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यालयलाईप्रति विद्यार्थी रु ४० हजारका दरले १० महिनाको अनुदान रकम उपलव्ध गराइँदै आएको छ । सोही खर्चमा कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ ।“हाललाई विद्यालयकै भवनमा स्रोत कक्षा सञ्चालन गरेका छौं” उहाँले भन्नुभयो, “छात्रावास, खानेपानीसँगै घेरावारको अभाव छ । त्यसका लागि नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई गुहार्दै आएका छौं ।”आयालाई रु १३ हजार ४५० मासिक तलब र स्रोत शिक्षकलाई मासिक ५०० भत्ता दिने व्यवस्था गरी नियुक्त गरिएको छ ।
विसं २०७४ देखि सञ्चालन भएको स्रोत कक्षामा सहभागी भई उमेर पूरा भएपछि चारजना बालबालिका घर फर्किएका छन् । “बौद्धिक आङ्गता र सुस्तमनस्थीतिका बालबालिकालाई विद्यालयमा जुनसुकै समयमा पनि भर्ना गर्न सकिन्छ”, प्रअ जोशीले भने, “बौद्धिक अपाङ्गता र सुस्तमनस्थीति भएका बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालयमा भर्ना गर्न ल्याए भर्ना लिन्छौं । प्रचलित नियम अनुसार पाउने सबै सुविधा प्रदान गरी आनीबानी सुधारसँगै पठनपाठनको व्यवस्था हुन्छ । घरको वातावरण भन्दा राम्रो गरी स्याहारसुसार गर्छौ ।”-रासस
–वासुदेव पौडेल गण्डकी, ३ माघ: ‘शिक्षा नपाए कि जानू काशी, कि जानू कास्की’ भन्ने उखान
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पर्वतमा पनि कार्यान्वयन गर्न आग्रह
पर्वत, ३ माघ: कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पर्वतमा
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भन्छन्, “भारत र चीनले नेपालको सीमा मिचेको भन्न सक्छन् र ?”
काठमाडौं, ३ माघ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भारत र चीनसँगको सीमा विवादमा कूटनीतिक
पहिले जस्तो लठिभद्र लकडाउन गर्दैनौंः मुख्यमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं, ३ माघ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पहिले जस्तो लठिभद्र लकडाउन गर्न नहुने
स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेललाई ऋषि धमलाको सवालः “नागरिकलाई पीसीआर र उपचार कहिले निःशुल्क हुन्छ ?”
काठमाडौं, ३ माघ । स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले पीसीआर परीक्षणको शुल्कमा चाँडै पुनरावलोकन हुने
पञ्चेश्वर सडकका मजदुर जयराम भुलले ऋषि धमलासँग रेडियोमै गरे ३१ महिनादेखि तलब नपाएको बिलौना
काठमाडौं, २ माघ । बैतडी, पाटनको पञ्चेश्वर सडकमा कार्यरत मजदुर जयराम भुलले ३१ महिनादेखि तलब
पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईको बचाउमा विष्णु रिजालः “क्याफ्टेरिया चलाउन दिनु अपराध हो र ?”
काठमाडौं, २ माघ । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ६ महिनाको बीचमा शेरबहादुर
डा. भोला रिजाल भन्छन्ः “महामारीमा सरकारले म्यादी स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरेर वडामै खोप दिन सक्दैन ?”
काठमाडौं, २ माघ । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालले म्यादी स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरेर भए